Radio Dharan 88.8 MHz गायिका मिलना रार्इको नयाँ एकल गिती एल्बम मिलन सार्वजनिक
गायिका मिलना रार्इको नयाँ एकल गिती एल्बम मिलन सार्वजनिक
गायिका मिलना रार्इले केही महिना अगाडी एकता म्युजिक प्रा. लि. बाट "मिलन गिती एल्बम" बजारमा ल्याएको छ । यसै एल्बका विषयमा गायिका मिलना रार्इ र संगितकार भिम कुलुङसंग रेडियो धरानमा गरीएको कुराकानी ।
१. मिलना गीति एल्बम कुन परिकल्पनाबाट बजारमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ?
- धेरै अघिबाट यो एल्बमको योजना बनाइएको हो । मिलनाले गाउन रुचाउने भएको, पहिले पनि थुप्रै भाषिक गित गाइसकेको अनुभव उनमा रहेको छ । योजना बनाउदै ल्याउँदा उनको सोलो एल्बम ल्याउने बिचारमा दशैं भन्दा केही अघिमात्रै एल्बम ल्याउन सफल भएका हौं ।
२. कति लागतमा यो एल्बमले पूर्णरुप पयो ?
- यति नै भनेर कन्फर्म नहुँदोरहेछ । लगानी त धेरै नै हुन्छ । स्टुडियो देखि लिएर गीतकार, संगीतकार त्यसरी नै भिडियो देखि सम्पूर्ण पाटोमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यतिनै लगानी लाग्यो भनेर कन्फर्म छैन । हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दा धेरै नै भयो भन्नु पर्छ ।
३. पाँचवटा गीतमध्ये तपाईंलाई व्यक्तिगतरुपमा मनपर्ने गित कुन रहेको छ ?
- (गायिका) पाँचवटै गीतहरू सबै उस्तै नै हुन् । छान्नै पर्दा “पहाडकी छोरी” मनपर्छ ।
- (संगीतकार) सबै आ-आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट नै छन् । आफूले जन्माएको सन्तान जस्तो भएपनि सबै उस्तै लाग्छ । तर पनि एउटा उत्कृष्ट छान्नै पर्दा लोक लयमा रहेको र शब्दहरु सधैभरी टिक्ने प्रकारको “पहाडकी छोरी” नै राम्रो लाग्ने गर्दछ । यसमा शब्द मेरै रहेको छ भने संगित उदिम रार्इको रहेको छ ।
४. रेकर्डिङ र प्रचारप्रसारको लागि म्युजिक कम्पनीले कतिको साथ दिएको छ ?
- एकता म्युजिक कम्पनिका संगीतकार उदिम राईको नै हो । उहाँले आर्थिक सहयोग नभएपनी भावनात्मक सहयोग देखि लिएर म्युजिक ट्रयाक बनाउन, स्टुडियोमा संगीतकारहरुलाई संयोजन गर्न देखि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । बजारको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उहाँबाट नै सहयोग भएको छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा गएका साथीहरुलाई पनि पठाइदिने कार्य गरिदिनुभएको छ । भिडियोको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको छ ।
५. “ओठमा लाली” बोलको गीतलार्इ अलिक धेरै बजारमा प्रमोसनमा ल्याउनुभएको छ । यो कस्तो प्रकारको गीत हो ?
- यो गितमा शब्द र संगित उदिम रार्इको रहेको छ । “ओठमा लाली” भन्नाले एउटा टिनएजको चेलीलाई सोचेर त्यो उमेरमा जे लगाएपनि राम्रो देखिने कल्पना गरेर बनेको गित हो । छिटो प्रकारको भएकाले पनि प्रमोसनमा राखेका हाै । विशेषगरी वैशमा हेर्दा जसरीपनि राम्री देखिने चेलीलाई सोचेर बनेको गित हो ।
६. “त्यसै-त्यसै” बोलको गीत कस्तो प्रकारको गीत हो ?
- यो गितमा शब्द र संगित मेरै रहेको छ । “त्यसै त्यसै अाँखा जुध्यो परेलिले बल्यो, मन्दमन्द मुस्कानमा मनको कुरा खुल्यो” भन्ने शब्दहरू छन् । यो गीत भावनाको विषयलाई लिएर कोरेको हो । यो गीतलार्इ आधुनिक मायाप्रेमको सुगम गीत भन्न रुचाउछु । एकजनाले अर्कोलाई देख्दा आँखा जुधेपछिका भावनाहरु यो गीतमा रहेको छ ।
७. “चाहिएको छ” र “परदेशीले” बोलको गीत कस्तो प्रकारको गीत हो ?
- “चाहिएको छ” गितमा शब्द सुनिल पुरी संगित उदिम रार्इको रहेको छ । “चाहिएको छ” भन्ने गीत एउटा देशभक्तिको भावना बोकेको गीत हो । “परदेशीले” बोलको गितमा शब्द चन्द्रकुमार रार्इ हतुवाली र संगित उदिम रार्इको रहेको छ । “परदेशीले” भन्ने गीतमा परदेश गैसकेपछि भुलिदिने, फर्केर आउँदा पनि सम्पर्क नहुने प्रकारको मायाबादी, विरह, वेदना र बिछोडको भावना बोकेको गीत हो ।
८. गित गाउने प्रेरणा कसरी मिल्यो ?
- (गायिका) पहिले हामी सानो छँदा हाम्रो गाउँमा एउटा क्लब थियो । क्लबबाट विभिन्न कार्यक्रममा जाने गर्दथ्याै । म कक्षा ३ मा पढ्दै गर्दा एउटा जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम भएको थियो । खोटाङ जिल्लामा हाम्रो विद्यालयबाट पनि भाग लिने कुरा भयो । त्यो बेला गीत गाएर दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भए । त्यो बेला सबैले राम्रो छ । तिमीले गाउनुपर्छ भनेर सरहरु र साथीहरुले पनि भन्ने गर्न थाल्नुभयो । त्यसैले राम्रो होला कि भन्ने पनि भयो । यसरी नै गीत गाउन सुरु भएको हो । पछी २०६२/६३ सालतिर डा. किरात गुरुबाट संगीतको सामान्य शिक्षा लिएको थिए ।
९. गित लेख्नका लागि कसरी समय मिलाउनुहुन्छ ?
- सिर्जना भनेको कस्तो हुँदोरहेछ भने त्यसलाई साइत जुराएर टेबलमा राखेर, सजाएर यो बेला लेख्छु भन्दा त्यो समयमा नहुँदो रहेछ । त्यो कतिबेला आउँछ, कतिबेला फुरीन्छ थाहै हुँदैन । जतिबेला पनि जहाँ पनि त्यो भावनामा आउँदोरहेछ । म संगीतको बिज्ञ मान्छे भने होइन । म एउटा संगीतको विद्यार्थी हो । मैले सुर र ताललाई बुझ्ने भएकोले गीतलाई लय हाल्दा हुँदोरहेछ भने अन्य गीतहरूबाट प्रेरणा पाएकोले यो सांगीतिक क्षेत्रलाई अघि बढाउँदै गएको हो ।
१०. तपाईको सांगीतिक जीवनमा मिलन गीति एल्बमले कस्तो महत्व राखेको छ ?
- यो एल्बम एउटा संगीतको एकमुष्ट किताब हामीले निकालेका छौ । पाँचवटा गीतको यो एल्बमले जे जस्तो भएपनि यसमा आफ्नो जीवनकालको एउटा इट्टा थप्ने काम भएको छ । यो एउटा आफ्नो जीवनको अध्याय भएकोले निकै महत्व रहेको छ । किनभने यो संगीतले नै हामीलाई चिनाएको छ । यसले नै हाम्रो मान मर्यादा पनि राखिदिएको छ । यसकै माध्यमबाट हामीलाई चिन्नुभएको छ । मिलनालाई पनि केही हदसम्म सबैले चिनेको कारणले यसको निकै महत्व रहेको छ ।
११. बाहिर सङ्गीतकार र गायिका घरमा श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ । घरको सांगीतिक माहोल कस्तो रहेको छ ?
- खासै त्यस्तो परिवारमा कोही पनि संगीतकार गीतकार हुनुहुन्न । पहिले-पहिले हाम्रो बाबुबाजेले आफ्नो संस्कार संस्कृति मान्दा सांगीतिक माहोल हुने गर्दथ्यो । वास्तवमा भन्दा त्यो पनि संगीतको अंश भएकोले त्यस्तै माहोलबाट नै संगीत प्रति लगाव बढेर आएको हो ।
१२. संगीतलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
- (संगीतकार) संगीत एउटा जीवन हो । म जीवन र संगीत एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा ठान्दछु । संगीत बादन, गायन र शब्द सम्मिश्रण भएर बनेको एउटा एकमुष्ट धुन हो । संगीत यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई क्षणभरमा हसाउँछ पनि रुवाउँछ पनि, संगीत भित्र डुबेर संगीतलाई बुझ्ने हो भने सम्पुर्ण जीवन पाइन्छ । यथार्थ, हाँसो, खुसी, रोदन संगीत भित्र हुन्छ । संगित मानिसको जीवनको ऐना हो ।
- (गायिका) धुन, शब्द र गायन सबै मिलेरबनेको एउटा पूर्णरुप नै संगीत हो । संगीत समाजको ऐना हो । जसलाई जोसुकैले आ-आफ्नो तरिकाले हेर्न र बुझ्न सक्छन् । संगीत मनोरञ्जन पनि हो ।
१३. अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
- (संगीतकार) सम्पूर्ण श्रोताहरुलाई हाम्रो सिर्जना सुनेर माया गरिदिनुहोला, आगामी सांगीतिक यात्रा फराकिलो बनाउनका लागि हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहोला भन्न चाहन्छु । हाम्रो सांगीतिक यात्रा अघि बढाउन लागि तपाईहरुकै हात छ । सम्पूर्णले हामिलाइ सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ।
- (गायिका) जसरी आज माया गरिरहनुभएको छ । यसरी नै आगामी दिनमा पनि माया गरिदिनुहोला ।